INKULULEKO KABUSHIRI – UKUNQOBA KUKAMBORO | Scrolla Izindaba
INKULULEKO KABUSHIRI – UKUNQOBA KUKAMBORO
Bobabili bathi bakhonza uNkulunkulu futhi baletha ukuthula ezimpilweni zezinkulungwane zabantu, kodwa sekuyisikhathi esidanyana manje abasekeli babo bobabili abefundisi bebheke abaholi babo bengathelelani amanzi.
Futhi manje impi isihambe ngokomoya, uMboro ethi imithandazo yakhe iyona enikeze uBushiri inkululeko yakhe.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi umholi webandla ongumfundisi we-Incredible Happenings uPaseka “Mboro” Motsoeneng ehlasele uBushiri ngezinsolo ezisola uMfundisi uShepherd Bushiri webandla le-Enlightened Christian Gathering ngokukhwabanisela abantu.
UMboro uthi uzishiye zonke izinkinga ngemuva futhi waguqa wathandazela ukukhululwa kukaBushiri.
NgoLwesithathu, uMphrofethi Bushiri nomkakhe uMary badedelwe ngebheyili yemali eyizi-R200 000.
Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa ngoLwesithathu, uMboro uthe uphuphe ngenkululeko kaBushiri.
“Ngathandaza ngicela inkululeko kuNkulunkulu. Ngicele uNkulunkulu ukuthi amunike elinye ithuba lokuthi alungise izinto nabantu ababekhala,” uyasho.
“Futhi impela indlela engithandaze ngayo, izinto zenzeke ngaleyo ndlela. UBushiri akalele ejele namuhla.”
Ngaphambi kokuboshwa kukaBushiri ngenyanga edlule, uMboro wathi wayethandazela ukuboshwa kukaBushiri. Kodwa ngoLwesithathu, uphumele ngaphandle enkantolo ethi uthandazele inkululeko kaBushiri.
“Bengazi ukuthi uBushiri uzokhululwa namuhla. Ngimthandazelile. UNkulunkulu uhlala eyiphendula imithandazo yami,” uyasho.
UBushiri nomkakhe uMary baboshwa ngoKlebe ngenyanga edlule ngamacala okweba imali, nokukhwabanisa.
Ngaso sonke isikhathi uma uBushiri evela eNkantolo yeMantshi yasePitoli, amakhulu abalandeli bebebuthana ngaphandle kwenkantolo ukuxhasa abaholi babo bezenkolo.
Ngenkathi ijaji limemezela ibheyili yabo, eze nemibandela eqinile, amakhulu abalandeli abebengaphandle kwenkantolo bebejabule.
Abalandeli be-Enlightened Christian Gathering bebelokhu bethi uBushiri akanacala futhi bebefuna aphume esitokisini lapho ebegcinwe khona cishe amasonto amabili.
Omunye wemibandela yebheyili kaBushiri ukuthi akavunyelwe ukuya noma kuphi ngaphandle kwaseGauteng naseSifundazweni sase-North West.